"Concrete pamusoro pekusimbisa mumiririri" yezvinhu zvinopisa zvekuisa
Concrete pamusoro pekusimbisa mumiririri rudzi rwemvura inogadzikana yemvura kemikari yekuomesa mumiriri. Iine chitarisiko chisina ruvara uye chakajeka. Iko kune maviri-echinhu zvigadzirwa uye imwechete-chinhu zvinhu mumusika. Iyo inosimbisa mhedzisiro yezvinhu zviviri-zvezvinhu zviri nani zviri nani ....
"Lightweight aggregate concrete" yezvinhu zvitsva zvekuvaka
Lightweight aggregate concrete (LGC), chimwe chezvinhu zvitsva zvekuvaka, ikongiri isina kuremerwa yakagadzirwa nehuremu huwandu pamwe nehukuru hwakawanda husingasvike 1900kg / m3, inozivikanwawo se porous aggregate lightweight kongiri. Lightweight uwandu nekongiri ane maitiro Lightweight agg ...
Kongiri yekuchengetedza tekinoroji musangano musangano 818 anovhura
Muna 2018, kugadzirwa kwekongiri kwenyika kwakasvika 2.35 mabhiriyoni emamita emamiriyoni, uye muna 2019, yakasvika pamamirioni emabhiriyoni emazana maviri nemazana mana ezviuru, iine gore-gore-kuwedzera pamusoro pe3,46%. Iko kushandiswa kwekongiri muChina kwakaverengerwa pasi rose kweanopfuura makore makumi matatu. Na 2019, yeChina yakazara highwa ...